Laser Chiller matihanina, mpanamboatra rano mpankafy ny rano |S&A Chiller
Fifehezana ny mari-pana amin'ny mari-pana ho an'ny rafitra laser sy ny fampiharana indostrialy nanomboka tamin'ny 2002
Ny fizotran'ny indostria Chiller
Ny mpangalatra rano mangatsiaka
Famoretana ny mpamono
Faharaharatsian'ny Cool Cool sy ny fifehezana ny mari-pana
20 taona niainako tamin'ny hatsiaka mahomby
S&A Chiller dia niorina tamin'ny 2002 niaraka tamin'ny fanamboarana akama 20 taona, ary ekena ankehitriny ho mpisava lalana mahay sy miaro tena sy mpiara-miasa azo itokisana ao amin'ny orinasa Laser. S&A Chiller dia manolotra izay nampanantenaina - manome fampisehoana avo lenta, azo itokisana sy vokatra azo antoka tsara sy mahomby amin'ny rano miaraka amin'ny kalitao ambony kokoa.
Ny mpitrandraka rano maneno matetika dia mety amin'ny fampiharana isan-karazany amin'ny indostria. Ary ho an'ny fampiharana Laser manokana dia mivoatra ny tsipika fenoLaser Water Chillers, miainga avy amin'ny vondron-tsofina tokana mba hametaka ny Tendrombohitra Unit, avy amin'ny hery ambany ka hatramin'ny andian-jiro avo lenta, avy amin'ny ± 1 ℃ ka hatramin'ny ± 0.1 ℃.
Nanampy ny mpanjifa tao amin'ny firenena 50 mahery izahay mba hamaha ireo olana be loatra amin'ny masinina miaraka amin'ny fanoloran-tena tsy tapaka amin'ny kalitao maharitra amin'ny vokatra azo antoka, fanavaozana sy fahatakarana ny filan'ny mpanjifa ......
S&A Chiller dia manolotra izay nampanantenaina - manome fampisehoana avo lenta, azo itokisana sy vokatra azo antoka tsara sy mahomby amin'ny rano miaraka amin'ny kalitao ambony kokoa.
Industrial Chiller System CW-6000 3KW hihena fahaiza 5 ka hatramin'ny 35 ° C Temperatura Control Range
Fitoeran'entana Tendrombohitra Chiller RMFL-1000 for 1000W Handheld Laser Welding Machine
Rano tony Chiller CW-6210 milamina Operation ± 0,5 ° C fametrahana mazava hihena
Industrial Chiller CW-5000 for CO2 Glass Laser Tube
Ny rano mafana portable Cwup-20 ho an'ny laser Ultrafast sy UV Laser ± 0.1 ℃ Stability Rs485 Communication
Large fahaiza Industrial Refrigeration Unit CWFL-12000 for 12KW Fibre Laser
Mba ho mpitarika ny fitaovana fampitaovana indostrialy eran-tany
Tsy mihoatra ny mivarotra ny vokatra fotsiny isika
Manolotra fanohanana ny mpanjifa 24/7 izahay ary mikarakara ny filan'ny mpanjifa manokana amin'ny alàlan'ny fanomezana torohevitra momba ny fikojakojana, ny torolàlana sy ny toro-hevitra momba ny fitifirana. Ary ho an'ny mpanjifa mpiandraikitra, afaka manantena ny serivisy eo an-toerana any Rosia, UK, Polonina, Mexico, Australia, Singapore, India, Korea ary Taiwan.
rehetra S&A Chiller atolotrao amin'ny mpanjifanay dia feno fitaovana maharitra izay afaka miaro ny bibikely amin'ny hamandoana sy ny vovoka mandritra ny fitaterana lavitra ka hijanona ao amin'ny toerana misy ny mpanjifa.
S&A Chiller dia niorina tamin'ny 2002 niaraka tamin'ny fanamboarana akama 20 taona, ary ekena ankehitriny ho mpisava lalana mahay sy miaro tena sy mpiara-miasa azo itokisana ao amin'ny orinasa Laser.
20 taona niainana
Hatramin'ny 2002, S&A Chiller dia natokana ho an'ny vondron-tsokosoko mpangalatra ary manompo isan-karazany isan-karazany, indrindra fa ny indostrian'ny laser. Ny zavatra niainantsika amin'ny fanandramana tsara dia ahafahantsika mahafantatra izay ilainao sy inona ny fanamby mahatsiravina atrehanao. Avy amin'ny ± 1 ℃ ka hatramin'ny ± 0.1 ℃, azonao atao ny mahita ranon-drano mety tsara eto amin'ny fizotranao.
Mba hamokarana ireo akoho mpamokatra rano tsara tarehy indrindra, nampiditra ny tsipika famokarana producted tamin'ny 18000m2 famokarana izahay ary nanangana sampana iray mba hanamboarana vy vita amin'ny lamba, compressor& Condenser izay singa fototry ny mpangalatra rano. Ny fahaiza-manao famokarana isan-taona dia mahatratra 100.000+ isan-taona isan-taona.
Ny kalitao no laharam-pahamehantsika ambony indrindra ary mandeha manerana ny dingana famokarana manontolo, avy amin'ny fividianana ireo fitaovana vita amin'ny akora mankany amin'ny fanaterana ny mpamono. Ny sakafonay tsirairay avy dia nosedraina ao amin'ny laboratoara eo ambany fepetra enti-miasa simika ary mifanaraka amin'ny che, rohs ary mahatratra ny fenitra miaraka amin'ny warranty 2 taona.
Izahay dia eo foana ho anao
Ny ekipantsika matihanina dia eo amin'ny serivisinao foana isaky ny mila fanazavana na fanampiana matihanina momba ny chiller indostrialy ianao. Nametraka teboka serivisy tao Rosia aza izahay, UK, Polonina, Mexico, Australia, Singapore, India, Korea ary Taiwan hanome serivisy haingana kokoa ho an'ny mpanjifana mpiandraikitra.
Izay lazain'ny mpanjifantsika
S&A Ny chiller dia manao vokatra tsara, fampiasana tsara ho an'ny hatsiaka ny lasantsy na ny fampiharana iray tsy manam-paharoa toy ny fitazonana ny CPU ihany amin'ny temps ambany.
- avy amin'ny client A.S.
Efa nampiasa ahoS&A Chillers ho an'ny roa amin'ireo tetik'asa sokitra laser sy ny asa dia asa lehibe izy ireo. Ary namaly haingana ny fanontaniako.
- avy amin'ny mpanjifa Aostraliana
Avelao fotsiny ny mailaka na ny nomeraon-telefaonanao amin'ny endrika fifandraisana mba hahafahantsika manome anao serivisy bebe kokoa!
Copyright © 2021 S&A Chiller - Zo rehetra voatokana.